Goorma ayaa Gayrettepe Istanbul Airport Metro la isticmaali doonaa? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGoorma ayuu Gayrettepe Airport Airport Metro shaqeyn doonaa?
19 / 01 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
Goorma ayuu gayttepepe istanbul metro khadka tareenka la isticmaali doonaa
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa ka hadlay Mashruuca Midawga Wadada Diyaaradaha ee Magaalada Gayrettepe-Istanbul. Erdogan Dooni inaan ku xarkaha samafal oo mashruuca, waxay u yaqaanaan Turkey ee 17 sano ee u dambeeyey ee mashruuca ugu weyn taariikhda ee, yeeray in ay qabtaan qayb muhiim ah oo mashruucan ee Istanbul, Airport Gayrettepe-Istanbul ayaa sheegay in uu soo dhawaaday dhammaadka Project Metro.
Isagoo carrabka ku adkeeyay in garoonka diyaaradaha ee Istanbul, oo markii ugu horreysay laga furay 90 milyan oo rakaab ah isla markaana leh fursad ay ku koraan illaa 200 milyan oo rakaab ah, ayaa ka mid ah mashaariicdan waa weyn, ayuu yiri Erdoğan:
“In kasta oo aan geyneyna garoonkayagayaga magaaladeenna, dabcan, ma iloobin baaxadda gaadiidka. Furitaanka, ganacsiga garoonka diyaaradaha ayaa durbaba bilaabay howlihiisa bas. Si aan u fududeynno una dardargalino gaadiidka dadweynaha, waxaan isla markiiba isku duubnay gacmaha gogosha dhismaha khadadka metrooga. Wadadan tareenka, oo dhererkeedu dhan yahay 37,5 kilomitir oo ka kooban 9 saldhig, waxay sidoo kale ku xiran tahay dhammaan khadadka kale ee gaadiidka dadweynaha ee Istanbul. Khadadka metrooga Gayrettepe-Istanbul waa mashruuca ugu dhakhsaha badan ee shaqada qodista ee waddankeenna. Sida Wasiirkayagu sheegay, waxaan si guul leh u wadnaa howshan, oo 10 mashiin oo qodista ah ay hal mar wada shaqeynayaan. 94 boqolkiiba shaqooyinka qodista iyo qayb muhiim ah oo tunelada ayaa la dhammaystiray. Waxaan gaarnay heer seddex-meelood meel xaqiijinta mashruuca oo dhan. Hadda waxaan bilaabeynaa saarista biraha. Hadafkayagu waa inaan gaarno rakibida tareenka 24-mitir maalin kasta oo leh 470-saac oo isdaba joog ah. ”
“Waxaan ku guuleysan doonaa Mowjadda Gawaarida Deg-degga ah ee Hore”
Madaxweyne Erdoğan wuxuu cadeeyay in biraha iyo qalabka isku xirka mashruucan ay soo saareen shirkado maxali ah ayna soo saareen injineerada iyo shaqaalaha Turkiga. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in nidaamka saxeexyada iyo taargada tareenka dhulka hoostiisa ee wadadan la wada gaari doono, ayuu yiri Erdogan, “Ma bixin karno oggolaansho ah inaan keenno shaqo kasta oo suurta gal ka ah waddankeenna, gaar ahaan muddadii adkaa ee aan soo marnay. Haddii ay jiraan wax khaladaad ah oo arrintan la xiriira, waxaan aaminsanahay in dhammaantood si dhakhso leh loo sixi doono. Markii si isku mid ah loo dhammaystiro, gawaarida waaweyn ee ugu dheereeya ee waddankeena waxay ka shaqeyn doonaan halkan 120 kiiloomitir saacaddii. Markaa, gaadiid u dhexeeya garoonka diyaaradaha iyo Gayrettepe waxaa la bixin doonaa 35 daqiiqo oo khadkaan ah, kaas oo sidoo kale ku guuleysan doona cinwaanka metrooga ugu horreeya ee waddankeena. ”
Erdogan wuxuu cadeeyay in hadafkoodu yahay in 28-ka kiiloomitir ee ugu horreeya ee qaybta illaa Hasdal la geeyo adeegga dhammaadka sannadkan, qaybta Kagithane bishii Abriil 2021 iyo Gayrettepe bisha Agoosto 2021.
Madaxweyne Erdogan wuxuu sheegay in ka dib Marmaray iyo Eurasia, tuneelkan cusub, ee ka gudbi doona Bosphorus, uu sidoo kale dhammeystirey mashruucii sahaminta ee Tunniga Grand Istanbul.
Isagoo caddeeyay in mashruucan uu yahay nidaam tareen oo leh dabeecad xawaare ku dheehan tahay oo isku xiri doonta 6,5 xarumood oo tareen oo kaladuwan ah oo ay isticmaali doonaan 11 milyan oo rakaab ah maalin walba, Erdogan wuxuu sheegay in howlaha diyaarinta Qandaraaska weyn ee Istanbul ay sii socon doonaan.
Erdogan, Gebze oo ah sii wadida Marmaray Halkalı Wuxuu sharraxay inay casriyeyn jireen khadadka tareenka ee biloowga illaa bilowga, iyo markii ay noqdeen Duqa Magaalada, dhererka nidaamka tareenka ee Istanbul wuxuu qiyaastii ahaa 34 kiiloomitir, maantana waxay Istanbul ugu adeegayaan nidaam tareen oo ah 233 kiiloomitir.
Meel u dhaw 190 km tunnel iyo 1100 km Subway
Erdogan wuxuu kaloo cadeeyay in dhismaha wadooyinka ilaa 14,2 km dhererkooda iyo dariiqyada mitirka 288 km dhererkoodu ay sii socdaan.
Hadafkayagu waa inaan ka dhigno magaalada Istanbul shabakad gaadiid ee ugu balaaran dunida, iyada oo ay biyuhu marayaan 190 kiiloomitir iyo metrooyinka metrooga oo gaaraya 1100 kiiloomitir. Wasaaradda Gaadiidkayadu waxay qaadatay 318 kiiloomitir nidaamka nidaamka tareenka ee 165-kiilomitir oo wali shaqeynaya ama socda. Sababtoo ah mashaariicda Istanbul waa kuwo aad muhiim u ah in loogu tago maamulada maxalliga ah ee magaaladan, waa muhiim waana weyn yihiin. Waxaan u adeegnaa Istanbul, kaasoo ah carwadda iyo ardayga dalkeena, oo leh farxad cibaadada. Waxaan sidoo kale fulinaa mashaariic waaweyn dowlad ahaan dhammaan 81ka gobol, waxaanan bixinnaa adeegyadii ay ummaddeena ugu baahan tahay dhaqso iyo wax ku ool. Annaga ahaan, tartan adeegga ayaa ka horreeya tartan siyaasadeed. Haddii magaalo u baahan tahay adeeg, ma eegno heerka codadka, kuxigeennada iyo dowladda hoose ee halkaas ku sugan. Mid kasta oo ka mid ah wasaaradahayadu waxay go’aamadooda ka gaadhaan goobahooda, dhammaystiraan diyaarintooda waxayna bilaabaan inay shaqeeyaan Halkan katbekat faham this dhammaan kuwa ku sameeyey taariikhda 17 sanno ee Jamhuuriyadda Turkey aan awoodin in ay la wareegaan adeega oo dhan. Waxaan sameynay dadaallo aan ku soo dhaweyneyno mid walba oo ka mid ah 82 milyan ee qof wax kasta oo laga soo bilaabo waxbarashadda ilaa caafimaadka, gaadiid ilaa tamartii, guryo aad u ballaaran ilaa cayaaraha, kaabayaasha magaalooyinka iyo waxtarka bulshada. ”
3. Goorma ayuu buundada u adeegi doonaa
Dhererka khadka toosan ee Istanbul